ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဗိုလ်ရွှေမန်းနဲ့ ကာလုံ
မင်းသားကြီးမလုပ်ရလို့ ပတ်မကြီးထိုးခွဲချင်တဲ့ အသုံးအနှုံး
အပြု အမူတွေ ဆင်ခြင်သင့်ပါပြီ။
မိဘပြည်သူတွေ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကို တွေ့ဆုံတဲ့ အခါ ကိုယ်
ရည်သွေးနေတာတွေ သူများမကောင်း ကိုယ်ကောင်းကြောင်း
ပြောနေတာတွေ ကယ်တင်ရှင်စည်းရုံးရေး လုပ်နေတာတွေ
သီချင်းထဲ ပါသလို အတ္တနဲ့ မာန ခဝါ ချကြပါ။ လူဘဝမှာ
ပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်းထုကိုယ်စား တောင်းဆိုပါရစေ***
လက်ရှိမြန်မာ.နိုင်ငံရေးမှာ ဒီမိုကရေစီရဖို. ဒေါ်စု ၊ ၈၈
ကျောင်းသားများအပါအ၀င် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေး ပါတီတွေ
ယနေ.တိုင်ကြီးစိုး ဆဲ စစ်အာဏာရှင်များ (ဘောင်းဘီဝတ်+
ဘောင်းဘီချွတ်)များ အပေါ်မှာသာမူတည်တာပါ ၊
ဒေါ်စု နဲ. ၈၈ ကျောင်းသားများ များရဲ. စစ်အာဏာရှင်များ
ကို အလိုက်သင်.ပေါင်း ပြီး ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ဆီသွားမယ်.
... ဖြစ်ပုံက ဘာနဲ.တူသလဲဆို
အသားမစားတော.မယ်.အချိန် ထိုင်စောင်.နေသလိုဘဲ ။ ။ ။